Burma Strange News (Burmese Version): ဟာသတွေ ပြောတဲ့ သခင်တင်မြ
မနေ့က ထုတ်တဲ့ ကြေးမုံ သတင်းစာမှာ သခင် တင်မြရဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ် ပါရှိတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးထဲမှာ သခင်တင်မြ ပြောထားတာက- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက "လမ်း၊ တံတား၊ ဆည်တွေ ဆောက်တာ ကောင်းသလား" လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးသတဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "မကောင်းဘူး" လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းကို ပြန်ဖြေပါသတဲ့။
သတင်းစာမှာ သခင် တင်မြ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သူလဲ အသက်ကြီးပြီ ဆိုတော့...
Posted by BS News at 1:23 PM
He isacurrent military officer Nay Win. No strange.
မင်းပြောတဲ့ နေ၀င်းက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘိုချုပ်ကြီးအဆင့်ရောက်နေလို့လားကွ။ သခင်တင်မြတင် မကဘူး. ဖတ်တဲ့ကောင်ကတောင် လာကပ်ပြီးမှားနေသေးတယ်။ သခင်တင်မြပြောတဲ့ နေ၀င်းဆိုတဲ့ မဆလနေ၀င်းကို ပြောတာ၊ အခုနောက်ပေါက် နေ၀င်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ငနဲကွာ။ လာမန့်နေသေးတယ်။
အသက်ကြီးမှစိတ်ဖောက်သွားတဲ့နိုင်ငံေ၇းသမားဟောင်းကြီး ၂ ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ယောက်က ဦးချမ်းအေး (မောင်စူးစမ်း)...
ဒီလိုသတင်းစာဆောင်းပါးမျိုးေ၇းလိုက်တော့ပြည်သူ၇ဲ့သောက်မြင်ကတ်ခံ၇မှာမသိရှာဘူး။ အသက်ကြီးတော့ ဦးဏှောက်ချောင်သွားတယ်ထင်ပါ့။
nyopyar88888 February 13, 2011 at 8:48 PM
ထားလိုက်ပါကွာ သ္ခင်တင်မြဆိုတာ ဗိုလ်နေ၀င်း ဖာချသွား၇င် အိမ်အောက်ကစောင့်ပေး၇တဲ့ အဆင့်ဘဲ၇ှိပါတယ်။။။။သေခါနီးနေတာတောင် တဖုတ်တ နေတဲ့ ကြီိးမိုက်
why she said Na Win Dam is not good?
Na win dam originally included water flow tubes for Hydro Electrical Power but it did not built Power plant at that time and sealed it for future plan . the problem is that tubes can not be opened and can not do anything now because the dam can be damaged and can destoy many lives, if some one reopen the tubes.May be can do, but very high risk.no one want to take responsibility for that job.
that's why , she said , the dam is not good,